Tirada dadkii ay laayeen Liyuu Booliska Itoobiya oo la shaaciyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1st June 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Guddoomiyaha Gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye (Cirfo) ayaa sheegay in ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Itooya ee loo yaqaanno Liyuu Boolis xasuuqeen dad Soomaaliyeed oo degan xadka gobolka Galgaduud iyo dowlad deegaanka Soomaalida.
Cirfo hadal ka jeedinayey furitaanka wajiga 2-aad ee shirka maamul u sameynta Gobollada Dhexe ee ka socda Cadaado ayaa tilmaamay in dagaaladaas lagu dilay ilaa 52 ruux oo isugu jira rag iyo haween, tuulooyin badana dab la qabadsiiyey.
“Dagaaladaas socday lixda maalmood waxaa ku dhintay ilaa 52 ruux oo 11 ay haween ahaayeen inta kalena rag, waxaa ku dhaawacantay afartan ruux, 18 tuulo ayaa la gubay, dad badan oo xoolo dhaqato ayaa barakacay”ayuu yiri Guddoomiye Cirfo.
Wuxuu sheegay gudoomiyuhu in inkastoo dadkaas badan la xasuuqay, haddana dagaaladaas haatan la qaboojiyey.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in arrintan ay xiriiro badan kala sameeyeen dowladda Itoobiya iyo saraakiisha ciidamada ee qeybta ka ah howl galka AMISOM, kadibna uu yimid is fahan, waxaana uu tilmaamay in ciidankii Liyuu Boolis laga saaray deegaanka, milateriga Itoobiyaan ay gaareen goobihii lagu dagaallamay.
Dagaalkan dadka badan ku hoobteen ayaa la sheegay inuu markii hore ka bilowday Gaari Booyad oo uu lahaa qof shacab ah oo ciidamada Liyuu Boolis xooga ku qaateen kadibna ay biyo uga dhaansanayeen baraag uu ninkaas lahaa.
Dhallinyaro reer Miyi ah oo ku beel ninka gaariga la qaatay ayaa la sheegay iney weerar ku qaadeen ciidamada Liyuu Boolis, taasoo keentay iney iyagauna ku duulaan tuulooyin farabadan.
Ciidamada Liyuu Boolis ayaa la sheegay iney dileen qaar ka mid ah mas’uuliyiin hoosaad deegaanka kala shaqeyn jiray dowladda Itoobiya, waxeyna sidoo kale maxaabiis ahaan u hayaan dhallinyaro badan oo reer Miyi ah.